Ngokuqinisekile wonke umuntu uyazi ukuthi Turkey, ne zokungcebeleka kokunethezeka namuhla bemthanda izivakashi abafuna ukuchitha iholide yabo ogwini. Futhi indawo kuhle ubhekwa yokungcebeleka emzaneni Beldibi. abahambi abaningi bathanda ukuhlala endaweni eziyinkimbinkimbi okunethezeka ehhotela Nirvana Lagoon Villas Suites SPA. Ngakho-ke yini lokhu nalokho ehhotela yokuhlala silindele izivakashi?
Indawo kanye incazelo ihhotela
I zikanokusho ehhotela eziyinkimbinkimbi Nirvana Lagoon Villas Suites SPA etholakala endaweni olunothile Beldibi, eduze nogu lolwandle, sizungezwe entabeni yeziqongo. Ibanga abadumile resort edolobheni Kemer kuyinto km 16 kuphela. Ngaphezu kwalokho, nakhu akunzima kangako ukuthola Antalya - itholakala 26 km. Esikhumulweni sezindiza zamazwe ngamazwe kuyinto km 36 kude.
Kuyinto ephawulekayo ukuthi lo mshumayeli yehhotela entsha ngokuphelele - ke lavulwa ngo-2014 futhi, ngokufanelekile, inganikeza isihambi zonke izinto zesimanje. Le ndawo Imininingwane kuyinto ayizinkulungwane 150 square metres, okuyizinto ezincane izakhiwo ezimbili storey, kanye Bungalows ethokomele. Kukhona engadini aluhlaza, futhi phezu kulo lonke ihhotela wasebenza kahle abaklami.
Ihhotela Nirvana Lagoon Villas Suites SPA: isithombe kanye nencazelo kwamakamelo amahhotela
Lesi sakhiwo ihhotela mikhulu - insimu yayo zikhona 560 amakamelo. Le ndinganiso amakamelo ekilasini futhi Deluxe (nge izinga eliphakeme induduzo), amafulethi umndeni libanzi futhi Villas ngisho encane esekusithekeni.
Zonke amakamelo ivulekile, nge namafasitela amakhulu. Laminate flooring, zihlonishwe ngokwabo anemisila design ultra-yanamuhla. Ngokwemvelo, kukhona isethi edingekayo imishini, kuhlanganise ithelevishini, air conditioning, ifriji ezincane, i-DVD-player. Kukhona ukufinyelela njalo kwi-Inthanethi. I kumavila amakamelo umndeni ube ahlukene ekhishini endaweni tableware futhi ezidingekayo ekhishini Imishini. Thokoza, kanye nekamelo lokugezela ivulekile nge ubusuku nemini amanzi ashisayo (kukhona eshaweni kwezinye amafulethi kubhavu). Nezincekukazi bahlanza nsuku zonke, ngakho amakamelo ziqondile futhi ihlanzekile.
Ihhotela likuvumela scheme "zonke okufakayo" enikeza ukudla nsuku zonke, plus Ungadla neziphuzo (kodwa endaweni ekhiqizwa kuphela), etholakala kulo lonke usuku. Ukudla kwenziwe yokudlela main (lakhonza "lezitsha"). Ngokusho ukubuyekezwa, ukukhethwa ukudla kakhulu: izithelo ezisanda kukhiwa, izitsha imifino, inyama, inhlanzi kanye, yebo, bendabuko okujabulisa Turkish kanye nama-dessert uzobajayela European.
Elisendaweni yokwamukela abantu, ichibi futhi ogwini kukhona imigoqo. Ngaphezu kwalokho, ungavakashela wendawo coffee shop bese uzama ikhofi real-Turkish. Futhi, ungakwazi ukubhuka itafula ngesikhathi zokudla zendawo a la Carte.
Ihhotela Nirvana Lagoon Villas Suites SPA has lolwandle endaweni yayo, ngenhlanhla, itholakala amamitha 20 nje - lapha ungakwazi ukufinyelela emva kwamaminithi ambalwa. Beach embozwe isihlabathi, okuyinto bahlanza nsuku zonke. Ngesikhathi coast kuyinto ophilayo coral zamakhorali. Ukwehla olwandle ifakwe ukhululekile pontoon lokhuni. Ngokwemvelo, kukhona inombolo ezanele emphemeni izihlalo nezambulela ukuthi izivakashi ungasebenzisa mahhala. Futhi uthole isiphuzo esiqabulayo kungaba ibha beach.
Fans of yokuchitha isizungu bakhuthele ngeke inyumbazana emakhazeni, kusukela lokho akhetha ukuzijabulisa ngakho omkhulu ngempela. Ngenxa ogwini coral ivamile phakathi abatshuzi - lapha ungakwazi ukuqasha ezidingekile scuba diving imishini, kanye uqeqesho izifundo. Ngaphezu kwalokho, izivakashi abathanda ukuhamba yesikebhe, izikebhe, catamarans, Ukushushuluza amanzi. Beach has a enakho volleyball enkantolo.
Ezokuzijabulisa namasevisi ezengeziwe
Ngokuqinisekile, ihhotela Uzame ukwakha zonke izimo iholidi ukhululekile futhi ujabule. Ukuze kube lula abahambi njalo egijima elondolo, zokuhlanza owomile, exchange, kanye yokupaka kanye imoto eqashiwe. Uma kudingekile, ungakwazi ukuya kudokotela.
Egcekeni kukhona ezinkulu yokubhukuda nge ilanga loungers kanye baphathe nezambulela emhlabeni. Ngaphezu kwalokho, zonke izinsuku ukusebenza amaslayidi amanzi, lapho zingaba nobumnandi hhayi izingane kodwa futhi abantu abadala kuphela. Ungase futhi uphumule sauna noma ubhavu ashisayo, hamba massage. Nsuku zonke, izivakashi isizungu yi Animators, futhi kusihlwa ungakwazi ukujabulela ukubukwa umbukwane imibukiso ezithakazelisayo.
kwabantwana kuyabakhathaza abazali abaningi abanesifiso sokwazi ukuthi ingabe izingane nijabula ehhotela Nirvana Lagoon Villas Suites SPA 5 *. Kids Club ivuliwe nsuku zonke futhi ifakwe i ebaleni lokudlala esihle ensimini. Izingane Ungase futhi zingena uzungeze pool abo bese nijabula kumaslayidi amanzi.
Isakhiwo ehhotela Nirvana Lagoon Villas Suites SPA: Izibuyekezo
Ngavele kumelwe bathi leli hhotela isesimweni esihle kakhulu izivakashi. Abavakashi ushiye okubuyayo kuphela. Ngokwemvelo, enye yezinzuzo kuyinto isondele kolwandle futhi umbukwane ukubukwa entabeni. Insimu Ihhotela ngokwaso njengoba kahle ezicatshangwe kahle yakhelwe.
Izivakashi ukugubha ukudla okuhle - ukudla yokudlela nje enkulu, njalo izitsha ngokwanele okumnandi neziphuzo etafuleni. Zonke abasebenzi inhlonipho nomoya ningi of them are umyalo ezinhle isiRashiya. Beach uhlanzekile futhi zigcinwe kahle. Ngisho izingane sizijabulise lapha, ngoba Animators ezihlekisayo ngokuqhubekayo ukuhlela lwemibono leyehlukene kanye nemisebenzi zokungcebeleka. Kafushane, ihhotela Nirvana Lagoon Villas Suites SPA ufanelwe nezinkanyezi zalo ezinhlanu.
Popular Murmansk zokudla
Gelatin ubuso: Izibuyekezo
Inkonzo okuphezulu futhi ubuhle bemvelo - Turkey Side 5 aphambili